ပျားလပို့ကို ADW Theme | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » themes » ADW Launcher ကို Themes » ပျားလပို့ကို ADW Theme
ပျားလပို့ကို ADW Theme APK ကို
ပျားလပို့ကို ADW Theme
ဒီအပြင်အဆင်သာ ADW Launcher ကိုသို့မဟုတ် ADW EX အလုပ်လုပ်မည်!
ဒီအပြင်အဆင် LDPI ဖုန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ!
HDPI / MDPI ဖုန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ
ဒီအသေး Beta ကိုဖြစ်ပါတယ်။
*** သင်ဤဆောင်ပုဒ်များကဲ့သို့ပိုပြီးအေးမြပစ္စည်းပစ္စယအဘို့အအောက်ခြေမှာက "အမြင်ကပို developer applications များ" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အကယ်. ! *** တစ်ရွေးသူ app ထဲတွင်စတော့ရှယ်ယာ Honeycomb နောက်ခံများအစုတခုလိုပဲ
ပျားလပို့ကို ADW Theme သင့်ရဲ့ icon တွေကိုစတော့ရှယ်ယာပျားလပို့ကို Android 3.0 ၏အသွင်အပြင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာရှာဖွေရေးဝစ်ဂျက်များနှင့် 350 + icon များနှင့်အတူတစ် icon ကိုဗူးလည်းပါဝင်သည်! ငါသည်ဤတစ်စတော့ရှယ်ယာကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်သည်, ထိုကို Android Market ကမှာတွေ့ရှိ apps များ theming မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ဆောင်ပုဒ်ကဘာလဲဆိုတာဆန့်ကျင်သွားရသောကြောင့် Market က App များကိုတောင်းဆိုကြဘူးပါ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့် app icon တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပြင်အဆင်သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းဒီတော့ပျော်မွေ့ဘို့ငါသည်ဤအခမဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါ့အပြင် rating ရသောအခါဒီအခမဲ့သတိရ🙂
T-Mobile ကအဓိကအကြောင်းအရာစနစ်အဘို့အကြှနျုပျ၏ Honeybread အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်အတူလိုက်လုပ်လေ၏။ ဤသည် Custom ROM ကိုရဲ့ Cyanogen Mod7(CM7) ကဲ့သို့သောများတွင်ပါဝင်သည်။
မည်သူမဆိုမည်သည့်ကိစ္စများကိုတွေ့လျှင်ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ Device ကိုလုပ်များနှင့်မော်ဒယ်နံပါတ်, အန်းဒရွိုက်စနစ်ဗားရှင်း, နှင့်သင့်ရှိခြင်းပြဿနာကိုမျိုးပွားရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပါဝင်သည်။
ယော်ဒန်မြစ် Anderson က says:
မေလ 10, 2019 မှာ 1: 31 ညနေ